Joahaza (mpanjakan'i Jodà) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Joahaza)
Ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia miantso azy hoe יְהוֹאָחָז / Yehoakhaz. Ny Septoajinta (Baiboly amin'ny teny grika) dia manoratra hoe Ιωαχαζ / Iôakhaz ary ny Volgata manoratra hoe Ioachaz. Ny Baiboly protestanta malagasy no ahitana ny hoe Joahaza fa ny Baiboly katolika malagasy kosa manoratra hoe Joakaza.
Tamin'ny nahafatesan'i Josia dia ny zanany faralahy, izay atao hoe Saloma ao amin'ny Bokin'i Jeremia (Jer. 22.11), dia nasandratry ny fivoriamben'ny vahoaka ho mpanjaka. Araka ny Boky faharoan'ny Mpanjaka (2Mpanj. 23.32) sy ny Bokin'i Jeremia (Jer. 22.15-16) dia tsy niraharaha ny fanavaozam-pivavahana nataon'i Josia rainy izy. Telo volana taorian'ny fanendrana azy dia nosamborin'ny farao Nekao II izy ka nogadrainy. Ny zokiny atao hoe Eliakima, lahimatoan'i Josia, no notendrena hisolo azy sady niova anarana hoe Joiakima na Joakima (hebreo: Yehôyaqîm) fa izy kosa nataon'i Nekao sesitany tany Egipta (2Mpanj. 23.31-34) ary maty tany (2Mpanj. 23.34).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Joahaza_(mpanjakan%27i_Jodà)&oldid=974563"
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2019 amin'ny 14:48 ity pejy ity.